किन आउँछ मुखबाट अमिलो डकार वा पानी ? – Health Post Nepal
किन आउँछ मुखबाट अमिलो डकार वा पानी ?
२०७६ कार्तिक ८ गते १३:४६
मुखबाट अमिलो पानी वा डकार आउने समस्या हामी धेरैमा हुन सक्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो समस्या आम बनिसकेको छ । प्रायः खाना खाएपछि मानिसलाई डकार आउने गर्छ । पेटमा भएको हावा बाहिर निस्कनेक्रममा पेटबाट अमिलो डकार निस्कने गर्छ ।
आखिर किन निस्कने गर्छ अमिलो पानी ?
चिकित्सकका अनुसार ग्यास्ट्रिकको समस्या भएमा अमिलो पानी निस्कने गर्छ, जुन प्रायः खाना खानुअघि वा खाएपछि निस्कने गर्छ । अपचका कारण पनि धेरैलाई अमिलो पानी आउने गर्छ । विशेषगरी, चिल्लो, पिरो वा अमिलो खानेकुरा तथा अधिक मात्रामा मदिराको सेवनका कारण पनि यस्तो समस्या हुने गर्छ ।
मुख्यतः पेटमा रहेको एसिडलगायतका तरल पदार्थ खाना जाने नली हुँदै माथि आएमा यस्तो लक्षण देखिन्छ । स्वस्थ मानिसमा खाना जाने नली र सञ्चय हुने पेटको बीचमा मांसपेशीले कसिलो बनाएको हुन्छ, जसले गर्दा एसिड माथि आउन पाउँदैन । तर, कुनै पेटका समस्याले त्यो खुकुलो हुन गएमा एसिड माथि आई अमिलो पानी आउने समस्या देखिन्छ ।
अमिलो पानी आउनुमा अन्य विभिन्न कारण पनि हुन सक्छन् । गर्भावस्थामा धेरैलाई अमिलो पानी वा अमिलो डकार आउने समस्या हुने गर्छ । विशेषगरी, पेटमा गर्भको आकार बढ्दै गएमा पेटमा बल पर्ने गर्छ । र, यसवेला बन्ने हर्मोन अन्ननलीको मुन्तिरको भागमा पुगेर यसले असर देखाउने गर्छ ।
त्यसैगरी, तनाव, अत्यधिक चिन्ता, छिटोछिटो खाना खाने बानी, मदिरा सेवन, अनियमित व्यायाम आदिले पनि अमिलो पानी आउने गर्छ ।
अमिलो डकारका कारण
अमिलो डकारको समस्या विभिन्न कारणले हुने गर्छ । विशेषगरी, खाना पच्नेक्रममा शरीरमा ग्यासको विकास हुँदा धेरैमा अमिलो डकारको समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । त्यस्तै, पेटको एसिड भोजननलीमा आएमा, पाचन प्रक्रियासम्बन्धी समस्या भएमा पनि अमिलो डकार आउने गर्छ ।
अमिलो पानी आउनुका लक्षण
अमिलो पानीको समस्यामा वाकवाकी लाग्ने तथा बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने, छाती पोल्ने, निल्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, दाँतको रङ बिग्रने, पेट दुख्ने, पेटको अल्सर, कब्जियतजस्ता लक्षण देखापर्छन् ।
दाँत बिग्रने वा झर्ने, सास लिनमा समस्या, अन्ननलीमा रक्तस्राव हुने, घाँटीमा समस्या, आदि अमिलो डकारमा हुन सक्ने समस्या हुन् ।
जाँच कसरी गर्ने ?
अमिलो पानी जटिल समस्या नभएका कारण यस्तो समस्या हुँदैमा डराउनु भने पर्दैन । यद्यपि, धेरैपटक अमिलो पानी आउने समस्या देखिएमा समस्याको कारण पत्ता लगाउन चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम विभिन्न जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । इन्डोस्कोपीमार्फत ग्यास्ट्राइटिस, अल्सर आदि थाहा पाउन सकिन्छ ।
अमिलो पानी तथा डकारको समस्याबाट बच्न केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तौल घटाउने, पिरो कुरा सकेसम्म नखाने, धूमपान नगर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, खालीपेट नबस्ने, सक्रिय जीवनशैली अपनाउने, सकेसम्म घोप्टो परेर नसुत्ने, चिया, कफी कम पिउने, तारेको वा भुटेको खाने कुरा नखाने गरेमा यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।